Igbo, John: Lesson 108 - Ihe a na-ekwu banyere ebubo Kraịst kwuru (Jọn 18:28-38) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 108 (The charge against Christ's royal claims)
a) Ihe a na-ekwu banyere ebubo Kraịst kwuru (Jọn 18:28-38)
28 Ha we duru Jisus si na Kaiafas puta na Pritoriọm. Ọ bụ n'oge, ha onwe ha abanyeghị na Pritoriọm ahụ, ka ha wee ghara imerụ ya, kama ha nwere ike iri nri Ememe Ngabiga ahụ. 29 Ya mere, Pailat bịakwutere ha, sị: "Olee ebubo unu na-ebo nwoke a?" 30 Ha zara ya, sị: "A sị na nwoke a abụghị onye ajọ omume, anyị agaraghị enyefe ya n'aka gị." Ya mere ndi-Ju siri Ya, O zighi ezi n'iwu ka ayi me ka onye ọ bula nwua: 32 ka okwu Jisus we mezu. , nke o kwuru, na-egosi ụdị ọnwụ ọ ga-anwụ.
Ụfọdụ ndị Juu chere na ha ga-egbu Jizọs n'oge mbụ mgbe ọ gwọrọ onye ọrịa ahụ na Bethesda (5:18), ebe ọtụtụ ndị ndú ndị Juu na nzuzo kpebiri na ọ ghaghị ịnwụ mgbe emesiri Lazarọs n'ọnwụ (11:46).
N'abalị Thursday, a haziri ndokwa abụọ dị mkpa nke Kansụl, Jọn ekwughị ya (Matiu 26:57-67 na 27:1). Ihe ndị Juu ndị a enweghị nchegbu banyere ndị gụrụ akwụkwọ Gris, ma Jọn mesiri okwu ikpe ahụ na-ezighị ezi banyere Jizọs, onye nnọchianya nke ikpe ziri ezi Rom, Paịlet, gafeere n'ogige ndị agha na-ele ụlọ nsọ anya. Naanị ya nwere ikike igbu ma ọ bụ otu.
Ndị Juu ahụ, bụ ndị ghọtara Onyenwe ha, dọtara azụ maka egwu mmetọ, ọ bụrụ na ha abanye n'ụlọ obibi ndị Jentaịl. Ha choro ka ha chekwaa odidi ha, ka ha soro nwa-nwoke na-elekorita anya. Ma ha gburu ezi Nwa Atụrụ Chineke.N'oge a dị oké mkpa mgbe ejidere Jizọs, nnukwu mgbanwe gbanwere na ndụ Pailat. Otu n'ime ndị ọrụ ibe ya, bụ onye isi ndị Rom, chụpụrụ Siza maka ime atụmatụ nnupụisi. Nke a n'ozuzu ya bụ ndị Juu na-adịghị achọpụta ihe ndị Juu na-eme. N'ihi ya, ikike ọchịchị Paịlet dara mbà n'adịghị ka nlelị ọ na-eme na nlezianya ọ na-emeso ha.Mgbe ndị Juu kpọgara Jizọs n'ihu Paịlet, gọvanọ ahụ bịakwutere ha ịjụ ihe ha chọrọ. Ọ naghị etinye oge dị ukwuu na-ekwurịta okwu, mana ọ ghọtara na ọ bụ mkpesa ha. Igosiputa udi nke Jisos nye Jisos bu ihe ngbaghara - onye eze n'ejighi ogwe aka ma obu ndi agha, abanye na Jerusalem n'elu inyinya ibu abughi ihe ojo nye Rom. Ma o kwetara ihe ndị Juu chọrọ, na-eme ka ha sie ike. O tinyeworị otu ọfịsa ha na ụlọ ọrụ ya, iji nyere aka jide Jizọs. Ọrụ ahụ rụrụ: Onye mkpọrọ ahụ nọ n'ebe ahụ na ebere ya. Ma, Pailat jụrụ, sị, "Gịnị ka ikpe mara ya?".
Ndị okenye ndị Juu kwupụtara n'ụzọ doro anya: Ị maara ihe anyị kwuru banyere ya na mbụ. Nwoke a bụ onye omekome ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụle nnupụisi. Anyị ekwesịghị itinyekwu ihe. Anyị abịaghị maka nleta na-anọchite anya ndị Juu. Anyi abiala ka anyi choo onwu ya, ka ndi mmadu wee ghara ime ka ha nwua.
Paịlet maara banyere obi ọjọọ ndị Juu na ajọ mbunobi ma mara na ebubo ahụ metụtara iwu ha na atụmanya nke Mesaịa dị ike. Jizos kwuru naob ghi ihe obla naemehie nime iwu Rom. Ya mere, o nyere Jizos n'aka ha na-ario ha ikpe ya ikpe dika iwu ha.
N'oge ahụ, ndị Juu enweghị ikike ịtụ nkume ndị na-emebi Iwu ahụ. Ha na-achọ imechu Jizọs ihu site na ikpe ndị mmadụ n'aka ndị Rom bụ ndị a na-ewere dị ka ndị na-adịghị ọcha. Ya mere, ntaramahụhụ kachasị njọ na-enye ndị ohu na felons ga-adakwasị ya - ka e bulie ya "osisi a bụrụ ọnụ". Nke a ga-apụta na Jizọs abụghị Ọkpara Chineke, Onye Dị Ike na Onye Ezi Omume, ma kama ọ bụ onye na-adịghị ike na onye nkwulu. Caiaphas pụtara na ọ ga-anwụ n'elu obe n'aka ndị Rom iji gosipụta na ọ bụghị Mesaya, kama ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ na onye nduhie.
33 Ya mere Pailat bà-kwa-ra ọzọ nime Pritoriọm, kpọ Jizos, si Ya, Gì onwe-gi bu Eze ndi-Ju? 34 Jisus zara ya, si, Gì onwe-gi nēkwu nka, ma-ọbu na ndi ọzọ gwara gi okwu bayerem? Pailat zara, si, Mu onwem abughi onye-Ju? Mba gị na ndị isi nchụàjà nyefere gị n'aka m. Gini ka i meworo? 36 Jizos zara, si, Ala-ezem esiteghi n'uwa nka. Edieke Obio Ubọn̄ mi odude ke ererimbot emi, mme asan̄autom mi ẹkeme ndin̄wana, ke ẹyeme ndinyan̄a mbon Jew. Ma ugbu a, Alaeze m esiteghị n'ebe a."
Ndị agha ahụ tinyere Jizọs n'ime ụlọ ndị agha ahụ. Mgbe Paịlet nụrụ ka ndị Juu boro ya ebubo, ọ chọkwara ịnụ ọnụ Jizọs n'onwe ya n'ọnụ ya. Pailat ekwenyeghi okwu nke ndi Juu, mao joriri Kraist, "Gi onwe gi b Eze nke Ndi Juu? Ahoh m Mesaia ozo ozo ejikere ezé, ezé na ajocha n'anya. onye na-eyi ọha egwu. I yiri ka ọ bụ onye obi nkoropụ, dị umeala n'obi ma dị umeala n'obi, olee otu ị ga - esi chọọ inweta Eze? Eze chọrọ ikike, ike na obi ọjọọ."
Jizọs chere na Paịlet nwere obi abụọ na ọ na-ekwu na ya bụ eze ma jụọ, sị, "Ndị agha gị hà gwara gị na ndị na-eso ụzọ m na-ebuso ha agha n'abalị, ka ndị na-agwa gị okwu hà na-anụ ka m na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ajụjụ gị dabeere na ụgha ndị Juu? egeghị ebubo ụgha."
Pailat zara, si, Mu onwem bu onye-Juu? Dị ka a ga-asị, "Agaghị m agbada ọkwa nke ndị isi ike ahụ siri ike, na-arụ ụka banyere isi ihe nke okpukpe n'abali na ehihie."
Ya mere, Pailat kwetara na ọ bụghị onye jidere Jizọs, kama ndị Juu, ndị ndú ha na onye nwe obodo ha. Mgbe ahụ, ọ jụrụ mkpirikpi, "Gịnị ka ị mere? Achọrọ m azịza gị n'aka ndị na-ebo gị ebubo." Kwuo okwu, ma ọ bụ a ga-akụ gị ihe;
N'ihe a, Jisos kwuputara eziokwu nile n'uzo nke o naghi eme ndi ozo. O kwuru, sị, "Alaeze Chineke bụ naanị ya, ọ bụghị nke ụtụ ma ọ bụ ngwá agha ma ọ bụ ọrụ iji jiri ndị ọzọ mee ihe." Alaeze Kraist agaghi agabiga dika ndi ozo. Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara iji mma agha, ma ọ bụ mgbu ọkụ ma ọ bụ bọmbụ. Alaeze ya dị nnọọ iche site n'Alaeze niile dị n'ụwa.
37 Ya mere Pailat siri Ya, Gì onwe-gi bu kwa eze? Jisus zara, si Ya, I nāsi na Mu onwem bu eze. Ọ bụ n'ihi nke a ka amụrụ m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji bịa n'ụwa, ka m wee gbaa akaebe maka eziokwu ahụ. Onye ọ bula nke sitere n'ezi-okwu ahu nānu olum. 38 Pailat si Ya, Gini bu ezi-okwu? Mb͕e O kwusiri nka, Ọ pua jekuru ndi-Juu ọzọ, si ha, Achọtaghm ihe kwesiri ntukwasi-obi. na-ebo ya ebubo.
Paịlet aghọtaghị ihe Jizọs kwuru, ma ọ ghọtara na onye ahụ boro ebubo kwupụtara na ọ bụ Eze n'emeghị ka ọbụbụeze ahụ pụta. Jisus zara ya, si, Gi onwe-gi amawo ihe nzuzom, ma gi onwe-gi bu onye-isi ala-eze-ya: ala-ayi esiteghi n'uwa nka, nke juputara n'okwu-ugha na nduhie: n'ihi na Mu onwem bu Eze nke ezi-okwu.
Mgbe ahụ Jizos gbara akaebe na ọmụmụ ya site na Meri nwa agbọghọ anaghị abụ mmalite nke ịdị adị ya, kama na ọ bịara n'ụwa anyị site na N'ihu. Ọ mụrụ ya site na Nna tupu afọ. Ọ maara eziokwu nke Chineke. Jizos gbaàmà nye Eziokwu nke Chineke, dika onye am riri ebighi ebi, ob onyeàmà ah nke kwesiri ntkwasiobi. Ma Paịlet chịrị ọchị ma jụọ ya, sị, "Gịnị bụ eziokwu?" Gọvanọ ahụwo ihu abụọ na aghụghọ nke ukwuu nke na ọ tụfuru okwukwe ya n'eziokwu. Ma Jizọs bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi nye eziokwu nke eluigwe guzosiri ike ma na-ekpughere anyị aha Nna ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ Eze m; Abụ m nke gị. Me ka m'bu orù nke idi-nwayọ-gi; Me ka m'guzosi ike n'ezi-okwu-Gi.
Olee otú na n'echiche dị aṅaa ka Jizọs bụ Eze?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)